Nagu saabsan - Hebei Jiuhe Hengye Fastener Manufacturing Co., Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co., Ltd.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co., Ltd., wuxuu ku yaal Yongnian, Handan, Hebei Gobolka. Waxyaabaha ugu waaweyn: nuts xoog badan, nuts qaro weyn leh, nuts tayo sare leh oo qaab dhismeedka birta ah, nuts gaar ah oo loogu tala galay qaab dhismeedka birta, iwm. Shirkadda ayaa horumar sameysay, intaas waxaa sii dheer, inay soo fiicnaato, oo hadda annaga warshadeheena waxay leedahay agabyo casri ah, kuwaas oo ah loo isticmaalay in lagu sameeyo dhammaan noocyada noocyada qabow madaxeed qaab gaar ah, sida nuts, boolal, bolts, hex bolte ， flange Bolt ， U Bolt ， qalabka ku shaqeeya korantada ， iwm. Shirkadda waxay leedahay koox farsamo ahaan khibrad leh iyo bey'ad xafiis wanaagsan.
Hebei Jiuhe Hengye Fastener Production Co., Ltd waa gole cilmi baaris cilmiyeed, wax soo saar, maamul sida mid kamid ah heerarka aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee shirkadaha. Jiuhe Hengye wuxuu had iyo jeer u hoggaansamaa falsafadda ganacsiga ee “adeeggu wuxuu wanaajiyaa qiimaha iyo tayada adduunyada”, wuxuu si adag ugu dhaqmaa dhaqanka shirkadda “daacadnimada, mas'uuliyadda, iskaashiga iyo wax wadaagga”, wuxuuna ku dadaalaa inuu abuuro tayada gaarka ah ee "Jiuhe Hengye". U hoggaansanaanta dhammaan aragtida macmiilka, baahiyaha degdegga ah ee macaamiisha, ka fikir waxa ay macaamiisha u maleynayaan, u hoggaansamaan hannaanka guuleysiga ee labada dhinac, oo u abuuro qiime macaamiisha.
Muddo dheer, soosaarayaasha Jiuhe Hengye waxay sumcad weyn ku leeyihiin warshadaha xawaaraha sare iyaga oo adeegsanaya nidaamka hubinta tayada ee kaamil ah, nidaam maamul oo adag, waxsoosaar xoog leh iyo ogaanshaha horumarsan iyo qaab xaqiijinta. Alaabtu waxaa si wanaagsan looga iibiyaa in kabadan 20 gobol iyo gobollo madax-bannaan oo Shiinaha ku yaal, oo si weyn ayey u aaminaan una taageeraan macaamiisha, waxayna heleen tayo wanaagsan.
Suuqa Wax Soo Saarka
Iyada oo ay jiraan shirkado badan oo caan ah oo caalami ah oo nashqadeeya oo soo saaraya agab, alaabadayada ayaa loo dhoofiyay Hong Kong, South Korea, Japan, Australia, Britain, Europe iyo Bariga Dhexe.
Wax kasta oo aad ubaahantahay inaad abuurto degel qurux badan